Nalalka & Kale
Hollywood shiday tarayn sminke Mirror la Lights Labiska Large Table-top Beauty Mirror
Midabada Available: silver
Hollywood qaabka wax aan waxba tarayn MIRROR
Maxaad xiddigaha waa muraayad isticmaal qurxiyo sida ay u qurxiyo?
The muraayad qurxiyo Hollywood dooran xiritaanka light in iftiinka maalinta, si fiican u garanaa heerka uu hadh, on qurxiyo si loo hubiyo in midab uniform. Oo waxaad isticmaali kartaa muraayada si ay u qurxiyo xaalad mugdi ah.
The nalalka LED cusub abuuray by BEAUTME badan yihiin tamar-keydinta iyo bay'adda u fiican, iyo fududahay in la badalo.
Xarrago MIRROR SALDHIGA
Waxay leedahay meel lagu kaydiyo accessories qurxiyo aad. Wejiyo iyo design haboon, waxaa jira 2 dekedaha USB dhinaca for amraya telefoonada gacanta iyo wixii la mid ah.
SMART XIDHIIDH KONTOROOLKA
design dimming xiriiri Intelligent, dhergin aad u baahan tihiin nuur dhalaalaya iftiin kala duwan ee deegaanno kala duwan ee qurxiyo.
Qorshahaa waxa qurux badan bixisaa Nuur xataa kaamil ah, iyo caddayn cajiib ah u fiican. Waa fiican ee codsiyada qurxiyo guriga ama goobaha xirfadeed!
Hollywood shiday tarayn Mirror
Haweenka iyo gabdhaha, noocan oo kale ah Lahaanshaha A tarayn Mirror Ma waxay Dream
The Hollywood muraayad style qurxiyo waa gabal fasalka salon, waa qalabka lagama maarmaanka ah qurxiyo xirfadeed xiddiga iyo artist qurxiyo. jir ah laga sameeyo daawaha aluminium oo tayo sare leh iyo habka lagu buufiyo adag oo fiican ayaa diiday, raad tola on jir ah, si ay u abuuraan jir kaamil ah, oo fiiriyaa dheeraad ah fasalka sare ah oo qurux badan.
Waxay kuu ogolaaneysaa in aad si aad u buuxiso joogtada quruxda dhammaataan, iyadoo aan loo eegin waqtiga maalinta, ku siin dareenka xiddig oo ku riyoon set wax aan waxba tarayn. Waxaan ku kalsoon nahay in tayada wax soo saarka waa ku filan si aad u la yaab inta aad na siiso fursad.
ALAABADA REAL toogtay
Nuurkii: Nuurkii hagaajin karo
Power: DC12V / 2A koronto-in adabtarada
3 Color Heerkulka nalalka LED: iftiin diiran jaalaha ah (3200k) & iftiin diiran cad (4800k) & maalin iftiin cad (6500k)
size Glass: 697mm (L) * 547mm (H) / (27.44 "* 21,53");
size Product: 720mm (L) * 120mm (W) * 565mm (H) /28.35 "* 4,72" * 22.2 ";
Mirror Miisaanka: oo ku saabsan 9kg
Baakooyinka Details: oogmay xumbo + Box Xidhmada
1 * muraayad qurxiyo dhaw Misbaaxyo, 1 * noo furaysto-in adabtarada; 12pcs keentay nalalka; 1 * guide user
Hollywood tarayn Mirror
Hollywood tarayn Mirror Iyadoo Lights
Size Large Hollywood tarayn Mirror
waxba tarayn Mirror Hollywood
La xaqiijiyey Iibso
Hollywood tarayn Mirror la hoggaamiyo nalalka, Tableto ...
Large Hollywood tarayn Mirror, Miiska Dushiisa ama Wall ...
Hollywood tarayn Mirror, Muraayadaha sminke Style w ...
Hollywood tarayn sminke Mirror Miiska Dushiisa ama Wall ...
Raac @Beautmeclub on Facebook ee dalabyo ugu dambeeyey
XIRIIR & CAAWIMO
Ma u baahan tahay macluumaad dheeraad ah? Fadlan nala soo xiriir si loo xaliyo wax kasta oo arrimaha ku saabsan waxyaabaha BEAUTME.
Best Hollywood makeup mirror that can ill...
Sidee loo dhaqaajiyaa muraayada marka guriga la rarayo?
Mirror Iyadoo Light nalalka , Qurxiyo Mirror Iyadoo Light nalalka, waxba tarayn Light nalalka , Wax aan waxba tarayn Mirror Iyadoo Light nalalka,